Ciidamo Careysan oo la wareegay Xarumo ku yaalla Galmudug | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Ciidamo Careysan oo la wareegay Xarumo ku yaalla Galmudug
Ciidamo Careysan oo la wareegay Xarumo ku yaalla Galmudug
Wararka aanu ka heleyo degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamo gadoodsan ay la wareegeen qaar kamid ah Xarumaha Maamulka ee Magaaladaas.
Dad ku sugan degmadaas ayaa waxaa ay sheegeen in Ciidamadaan oo ka tirsan Booliska Soomaaliya oo sanadkii hore la diiwaangeliyey ay ka cabanayaan mushaar la’aan ay la wareegeen Xarumo ay kamid yihiin Taliska Booliska degmada iyo Maxkamadda ee dagmadaas.
Ciidamadaan oo tiro ahaan lagu sheegay ku dhowaad 100 Askari ayaa waxaa saraakiisha hoggaamineysa ay sheegeen in muddo laba bilood ah aysan qaadan wax mushaar ah,isla markaana ay doonayana inay helaan xaquuqdooda.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in degmada Cabudwaaq ay ka socoto waan waan ku aadan sidii loo xalin lahaa Ciidamada,taas oo ay wadaan mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka degmada iyo Saraakiil kale oo ku sugan degmadaas.
Majirto mas’uul ka tirsan Madaxda Sare ee Galmudug oo ka hadlay gadoodkaan ay sameeyeen Ciidamo ka tirsan Booliska Galmudug,hayeeshee qaar kamid ah Maamul goboleedyada ayay Ciidamadooda dhowr jeer gadood sameeyeen.